Etazonia: Asiana Indray Ny Kolontsain’ny Mpifindra Monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2012 0:06 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, русский, বাংলা, Italiano, Magyar, polski, srpski, Dansk, Ελληνικά, 日本語, Català, Svenska, македонски, Español
Miankina amin'ny sata ARS-15-112, lalàna HB 2281 ny fanapahan-kevitra nankatoavin'ny lehiben'ny fandraharahana ao amin'ny sekolim-panjakana, misahana ny distrika ao Tucson, John Huppethal, tamin'ny volana janoary lasa teo. Araka ny fanazavan'i Jasmine tao amin'ny LatinitasMagazine, dia mandrara ny fisian'ny lakilasy na taranja ahitana zavatra toy izao ny lalàna:
Tsindrio eto raha hamaky ny lisitra feno.
Nisy ny Fitakiana an-tserasera natsangana toy ny bilaogy ho fanohanana ny fametrahana indray ny tetikasa fampianarana Meksikana-Amerikana. Banning History, ohatra, manaiky izay lahatsary ahitana olona mamaky teny, mihira na mampiseho ny sombin'ireo boky noraofina an-keriny.
Vondrona mpampianatra mpitolona (VMM) miara-miasa amin'ny Rethinking Schools (Misaina indray ny Fianarana) nanantotosa hetsika fanentanana ihany koa antsoina hoe “Tsy misy tantara tsy ara-dalàna: fanentanana ho fiarovana ny tantarantsika”. Namorona fampianarana mivelatra sy mifototra amin'ny lesona tao amin'ny tetikasa noraràna ihany koa izy ireo, mifameno amin'ireo lesona mikasika ny tolona ho amin'ny fahalalahana haneho hevitra sy ny fahasamihafan'ny kolontsaina izany.
Tokony hihamafy ity firaisankina midadasika ity satria fanefitra iray mahery vaika hoentina hanoherana ny fanararaotam-pahefana, ny tahotra sy ny fanavakavaham-bolokoditra. Amin'ny volana martsa hoavy izao, ho tonga any Houston, Texas hatrany Tucson, Arizona ny karavana Librotraficante mba hizarana ireo boky natao sivana .